Fursadaha Internetka Guriga
Haddii aad ku sugan tahay aagga adeegga maktabadda Dadweynaha ee Magaalada Kansas, waxaad u badan tahay inaad haysato saddex ikhtiyaar oo waaweyn oo loogu talagalay adeegga internetka ee internetka ballaadhan: Charter Spectrum, Google Fiber, ama AT&T. Dabcan waxaa laga yaabaa in laga reebo! Haddii aad u-qalanto bixiye kasta wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro qiimo jaban si adeegga internetka ee guriga looga dhigo mid adiga kugu habboon. Fiiri hageheena degdegga ah: Kala-doorka Internet-ka Qiimaha Jaban ee KCMO.
Fursadaha Internetka ee KCMO Home
Ogeysiis Gaar ah: Ka jawaab celinta faafida COVID-19, waxaa jira laba ikhtiyaar oo loogu talagalay dadka deggan metrooga KC si ay u helaan gargaar isqorista iyo / ama bixinta adeegga internetka guriga!
Barnaamijka Taageerada Helitaanka Internetku wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho adeeg la awoodi karo, wuxuu kaa bixinayaa hadhaagii hore, wuxuu kugu qaban doonaa biilashii lagugu lahaa ee la soo dhaafay, wuxuuna bixinayaa biilkaaga illaa 6 bilood.
Iyadoo loo marayo EBB ee FCC, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad hesho qiimo dhimis ah illaa $ 50 bishiiba internetka guriga. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ka hesho qiimo dhimis hal mar ah oo dhan illaa $ 100 marka aad ka iibsanayso laptop, kombiyuutar desktop ah, ama kaniiniga bixiyeyaasha ka qayb qaadanaya haddii aad ku darsato $ 10 illaa $ 50 qiimaha iibka.
Barnaamijka Taageerada Helitaanka Internetka
Gargaarka Ballaadhka Degdegga ah